Mofomamy malefaka, amin’ny yaourt Ho an’olona 6
Akora ilaina Atody 3 Yaourt tsy mamy 1 Leviora 1 fonosana (5,5 g) Lafarina 2,5 pots yaourt Siramamy 1,5 pot yaourt Siramamy misy hanitra lavanila 7,5 g Menaka ½ pot yaourt dibera 10grama
Beignet amin’ny paoma
Akora ilaina · Paoma 4 · Ranom-boasarimakirana 1 · Siramamy · Menaka hanendasana
Pizza andrahoina amin’ny sarom-bilany
Betsaka no tsy manana lafaoro amintsika. Tsy tokony ho sakana amin’ny fikarakarana sy fihinanana “pizza” nefa izany satria sarom-bilany fotsiny no ilaina dia efa mahavita “pizza”
Vinegrety amin’ny tsiro samihafa
Saosy tsy azo hiodivirana amin’ny fampiasàna azy ny vinegrety. Ahoana no hanovàna ny tsirony araka ny sakafo izay hohanina aminy. Ny fanamboarana ny vinaingitra, ny sira sy ny dipoavatra ary ny menaka mantsy no fototra. Ampiana “moutarde” kely izany dia efa mampiavaka azy.
1. Hafanaina eo amin’ny 160°C ny lafaoro
2. Afangaro avokoa ireo akora rehetra anaty lisitra
3. Arotsaka ao anaty lasitra efamira iray io fangaro io dia saromana « papier aluminium »
4. Andrahoina mandritra ny ora iray na an-tsasak’adiny eo
5. Rehefa masaka dia esorina eo ambony lovia handrosoana azy ka ampiarahina amin’ny salady na « cornichon » efa voatetika